Ezinye izixhobo zokuphakamisa, iimoto zemoto kunye nevenkile ePhambili I-Epont Jack
Ikhaya > Iimveliso > Ezinye izixhobo Eziphakamisayo
Ukuphakama kwemoto yemoto kuphantsi, nto leyo iqinisekisa ubuchule bayo betrafiki kwaye inokudlula ngokulula ngokuhamba kwemoto. Ilungele phantse kuzo zonke iintlobo zeemoto kwaye ayinakuphela kuphela ukusetyenziswa kwekhaya, kodwa nakwiivenkile ezi-4s.
Isakhelo se-Creeper senziwe ngemibhobho yentsimbi, enokuthwala ubunzima obungama-300 i-LBS kwaye inokusetyenziswa ngumntu okhulileyo olele kuwo. Umphezulu wombhobho wentsimbi ugutyungelwe yipeyinti, enokuthintela i-runun kunye nokunyusa ubomi benkonzo.
Kukho amavili abathandathu akwindawo ephantsi kwemoto yemoto eguquguqukayo nesemotweni. Ungalawula i-cesper yemoto ukukhangela kwikona nganye ye-chassis ngaphandle kokushiya nekona yokhuseleko.
Lo mshicileli wevenkile yenzelwe ukulungisa, ukugoba, ukucinezela, kunye ne-Stamp.